Ihe 6 nke onye egwu egwu gi kwesiri inwe Site na Linux
AnaGaby_Clau | | GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Maka ndị egwu egwu, Linux nwere ọtụtụ egwuregwu ma ị gaghị ama nke ị ga-ahọrọ. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịkọwa ụfọdụ atụmatụ anyị weere dị mkpa maka ọkpọ egwu egwu dị mma.
1 The ihe ọkpụkpọ kwesịrị-enwe ike ahazi mbubata music enweghị mgbanwe
2 Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị inwe atụmatụ "smart playlist"
3 Onye ọkpụkpọ ahụ ekwesịghị ịmanye onye ọrụ ka ya na ndepụta ọkpụkpọ mgbe niile na-emekọrịta ihe
4 Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịnwe ụzọ dị mfe iji tinye ihe oyiyi mkpuchi
5 Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị igosipụta ọnụọgụ bit dị irè mgbe egwu ahụ na-egwu
6 Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịnwe nzukọ dị mma, nhazi na arụmọrụ
The ihe ọkpụkpọ kwesịrị-enwe ike ahazi mbubata music enweghị mgbanwe
Nke a ga - eme ka egwu ahụ gbanwee ọnụego ntakịrị na omimi na ada. Ọ na - emekwa ka ọ dị mfe itinye mgbama ahụ na ntụgharị ụda dijitalụ dị na mpụga, nke a raara nye egwu egwu hi-fi ma nwee ike iji ekweisi ezi.
Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị inwe atụmatụ "smart playlist"
Maka na mgbe ịnọ na nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, soro ndị enyi gị zukọ ma ọ bụ sie nri, egwu ndị dabara adaba na-aga n'ihu na-ada ụda na oge ahụ dị egwu.
Onye ọkpụkpọ ahụ ekwesịghị ịmanye onye ọrụ ka ya na ndepụta ọkpụkpọ mgbe niile na-emekọrịta ihe
Echiche bụ na ị nwere ike ịpị abụọ na album ma ọ malite igwu egwu, na-enweghị mkpa maka ịpị clicks iji megharịa listi ọkpụkpọ ahụ.
EOnye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịnwe ụzọ dị mfe iji tinye ihe oyiyi mkpuchi
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-enwe nkụda mmụọ na njirimara a. Ha na-enwe mmasị ka isiokwu ha nwee mkpuchi ziri ezi na echiche a bụ na onye ọkpụkpọ na-anabata ihe oyiyi dị mfe iji tinye ha na enweghị nsogbu. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị agbanwe mmemme iji hụ abụ na foto ziri ezi.
Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị igosipụta ọnụọgụ bit dị irè mgbe egwu ahụ na-egwu
Naanị n'ihi na anyị chọrọ ịma na ihe niile ziri ezi.
Onye ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịnwe nzukọ dị mma, nhazi na arụmọrụ
Recommendationsfọdụ ndụmọdụ bụ: Guayadeque, QuodLibet, Gmusicbrowser, DeaDBeeF, Audacious, Rhythmbox. Otú ọ dị, anyị ga-achọ ịnụ echiche gị na aro gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » 6 atụmatụ gị music player kwesịrị inwe
Ana m eji Qmmp, o di nma
Zaghachi Jose de Costa
Yabụ abụ m ọdachi anaghị m achọ ihe ọ bụla, ihe niile m na-ajụ bụ na ọ na-anabata usoro niile ma ọ naghị arapara, ọ bụ karịa m na-egwu egwu na VLC xDDD
Sayonara baby… .. Guayadeque dikwa ezigbo nma
Echiche nke onwe:
Rhythmbox, iji nyefee onye na-agụ m na egwu m egwu m. Ọrụ ya nke ọma.
Banshee, iji debe folda egwu ahụ n'usoro, ndị egwuregwu ahụ na-ejedebe onwe ha n'igosi egwu ndị a nyere iwu na interface ha mana ọ bụghị na folda ahụ nwere ha.
Clementine, ekwentị m dị ka a anya akara. Ọ bụ ugbu a ngwa android na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ọtụtụ ohere.
M na-eji Clementine; ọ dị ezigbo mma. N'agbanyeghị nke ahụ, echere m na ọ dịghị ihe na-emeri ụdị Amarok 1.4.
Ekwenyere m na Nasher_87: VLC rulez!
E wezụga nke ahụ na VLC ị nwere ike ịmepụta listi ọkpụkpọ, gbanwee foto mkpuchi, lee bitrate, dezie metatags,… ma gee egwu ahụ, nke bụ ihe m jiri ya.
Zaghachi Onye mere
Onye Amarok ji ebe a. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ihe na-adịghị adịkarị n'ihi na mbipute 1.4 meriri kpamkpam yana mgbanwe ya na 2 siri ike. Ma ugbu a, ọ na - arụ ọrụ na njirimara niile o nwere na ọtụtụ ndị ọzọ.Mgbe m tinye MP3, a na - emelite nchekwa data na akpaghị aka, ọ bụrụ na metadata ezighi ezi, jiri MusicBrainz mezie ya, ọ na - achọ mkpuchi ahụ na akpaghị aka. dị mkpa (ole na ole Mgbe ụfọdụ ọ na-emehie, ma ọ bụrụ na ọ mee, enwere m ike iji aka ya rụọ ya), ọ na-arụ ọrụ dị mfe na ngwaọrụ MTP, ọ nwere nhọrọ nke ndepụta akpaka (nke m na-ejighi mee ya), ana m ejikwa ụzọ mkpirisi uwa jikwaa egwu ahụ ma ọ bụ igodo multimedia na m na-eji KDE Jikọọ iji ekwentị m na-achịkwa. Ya mere ... onye ọrụ obi ụtọ na ebe a
Zaghachi na eVer
M na-eji audacious, clementine, vlc nakwa mplayer 🙂
Ezuru m mkpa VLC.
Zaghachi na MapHSV
Maka ugbu a ike gwụrụ m na mmemme niile ahụ, ana m eji mpd + ncmcpp ma ọ bụrụ na m nọ na ekwentị, ana m achịkwa egwu m chọrọ igwu ebe a ma ọ bụ na m na-agbakwunye ya na ndepụta ahụ ma ọ bụ usoro gara aga, m mepụtara ndepụta na m na-ebufe onye ahụ dị njikere igwu egwu.
ps: Ike gwụrụ m ịnwa na ịnwale, na m, nke a bụ azịza kachasị mma maka ugbu a.
Eziokwu ebe ọ bụ na m na-eji Spotify, ana m ewepụ ndị egwuregwu ahụ. Nchọpụta ahụ na Ubuntu na Linux enweghị nkwado n'otu ọkwa dị ka Mac na Windows.
Mana ọ bụ ezigbo ngwa, tupu nke ahụ na Clementine ọ bụ ọkpụkpọ ndabere m.
Abụ m onye ọrụ Amarok 1.4 kwa ụbọchị
Mana kemgbe m gbanwere Amarok 2, achọgharịrị m ọzọ ma bịa Clementine. kemgbe ahụ ọ bụrụla onye ọkpụkpọ m.